‘पर्फमेन्स आर्ट’ देखाएर सरकारको विरोध - Samadhan News
‘पर्फमेन्स आर्ट’ देखाएर सरकारको विरोध
समाधान संवाददाता २०७७ माघ २५ गते ८:३१
माइकमा एक युवक जोडजोडले चिच्याइरहेका छन् । उनको अगाडि उभिएका हरेक प्रश्नमा ‘छैन–छैन’ भन्दै उठबस गरिरहेका छन् ।
माइक समातेर बोलिरहेका युवा त्रिवेणी प्रश्न गर्छन् – प्रतिगमन भएको छ ?आँखा र मुखमा पट्टी बाँधिएका ९ जना युवा ‘छैन–छैन’ भन्दै उठबस गर्न सुरु गर्छन् ।
त्यसपछि जतिपटक प्रश्न गरिन्छ, युवाहरु उठबस गरेर ‘छैन–छैन’ मात्रै भनिरहन्छन् । पोखराको पृथ्वीचोकमा शनिबार दिउँसो ४ः१० देखि ५ मिनेट यस्तै दृश्य देखिन्थ्यो ।
त्रिवेणीले यस्ता प्रश्न सोधिरहेका थिएः
देशको जनता दुःखी छन् ?
जताततै अशान्ति छ ?
यहाँ जनता भोकै मर्दै छन् ?
भ्रष्टाचारीलाई छुट छ ?
समृद्धिको झुटो नारा छ ?
नेताको बोलीमा झुट छ ?
यहाँ सत्ताको गोरु जुधाई छ ?
न्याय माग्नेलाई लाठी छ ?
यी प्रश्न देख्दा लाग्न सक्छ, छ भन्नुपर्नेमा पनि किन छैन भने ?हो, युवाहरु व्यंग्यात्मक ढंगले सरकारको विरोध गरिरहेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णय विरोधमा नाट्य कलाकार ‘पर्फमेन्स आर्ट’ प्रस्तुत गरिरहेका थिए ।
ती ९ कलाकारको अनुहार आँखा र ओठ बनाइएको पट्टीले ढाकिएको थियो । यसको अर्थ शासक र उनका समर्थक गलतलाई ढाकछोप गर्न खोज्छन् भन्ने हो । कलाकारको अनुहारमा बाँधिएको पट्टीमा खुल्ला आँखा र हाँसो छ । तर कसैले पट्टी बाँधेर गलतलाई सही भन्न दिइरहेको छैन र हाँसोलाई निमिट्यान्न पारिरहेको छ ।
नेपालमा खासै प्रचलनमा नरहेको यो कला हाउभाउ, अभिनय वा संगीतको माध्यमबाट देखाइन्छ । कलाकार सुनील सिग्देलको सल्लाहमा शरद भण्डारी नेतृत्वको टोलीले पोखरामा शनिबार ‘पर्फमेन्स आर्ट’ प्रदर्शन गरेको हो ।
पोखरामा आयोजित नागरिक आन्दोलनमा शनिबार ‘पर्फमेन्स आर्ट’ सँगै कविता पनि वाचन गरिएको थियो । सुरज उपाध्याय, सुदर्शन पौडेल, रोशन तिमिल्सिना, रीता अधिकारी, डा. चैतन्य अधिकारी र विकास रोका मगरले कविता वाचन गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा नागरिक अभियन्ता युग पाठकले देशमा जुनसुकै समयमा निरंकुश अनुहार निस्कने अवस्था पहिल्यैदेखि रहेको बताए । ‘कहिले दरबारबाट, कहिले राजनीतिक दलबाट निस्केर आउन सक्दो रहेछ । त्यो निरंकुशता जसले जनताका समस्यालाई बेवास्ता गर्दै मुलुकलाई एकाएक अस्थिरतातिर धकेल्दिन सक्दो रहेछ,’ उनले भने ।
पाठकले काचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘मुखचलाउ प्रधानमन्त्री’ को संज्ञा दिए । राष्ट्रवाद, स्थिरता र समृद्धिको सपना देखाएर राजनीतिक नेताले जनतालाई निराशातिर धकेलिदिएको जिकिर गरे । प्रधानमन्त्री ओलीको संसद विघटन गर्ने निर्णयको विरोधमा काठमाडौंमा हुँदै आएको प्रदर्शन गत हप्तादेखि पोखरामा पनि सुरु भएको हो ।